Ny milina famolavolana fantsom-panafody dia mihatra amin'ny vokatra ampiasaina isan'andro, tavoahangy rano fanatanjahan-tena, tavoahangy famonoana bibikely, tavoahangy fanafody, tavoahangy kosmetika, fitoeram-panangonana sakafo, faritra fanaka, faritra misy fiara, kilalao, canina jerry ary plastika poakaty kely na salantsalany vokatra. Ny fanohanana maharitra tsy tapaka dia fitaovana fampitaovana tsara indrindra ho anay. Isaky ny dingana rehetra amin'ny tetikasanao, eto izahay hanome torohevitra ara-teknika. Ny fahafaham-ponao amin'ny fanandramana mividy dia fanekena lehibe ho anay. Izahay koa dia manolo-tena hahatanteraka ny fahombiazan'ny famokarana, miaraka amin'ny tanjon'ny fiaraha-miasa mandresy.
MASINA FAMPISEHOANA FAMPISEHOANA 1L-30L
TONVA ara-pahasalamana mampiasa milina PP tony swab famokarana extrusion mitsoritsika milina
Smart andian-dahatsoratra mitsivalana tsindry milina koronosy milina dia TONVA orinasa'orignal famolavolana, natambatra hydraulic sy pneumatic. Ny fampisehoana dia milamina ary mihazakazaka milamina, mora ny miasa, madio sy haingana. Mety amin'ny tavoahangy zava-mahadomelina, tavoahangy fanasana, tavoahangy solika, kilalao plastika, zava-pisotro, verage tavoahangy, boaty fandefasana sns, vokariny: 5mL-5L
1.Araka ny andiam-pandaharana mahazatra anay, mahavita tsara izy io ary ny fampandrosoana sy ny fanatsarana an-taonany maro dia nahazo fankatoavana avy amin'ny mpanjifanay. Ny varotra eran-tany dia nahatratra andiany an-jatony 2. Ity modely ity dia mifanaraka amin'ny tavoahangy biby amin'ny endriny sy endrika samy hafa 3. Ny fanavaozana dia voadona tanteraka ary nafana sy nafana tokoa tamin'ny jiro infrared Optimised 4.Ny motera dia entin'ny rivotra avy any ivelany: maharitra, tsy misy loto ary tabataba ambany 5. automatique avo lenta sy faharanitan-tsaina 6.Fiorenana fanarenana entona avo lenta azo namboarina sy ampiasaina amin'ny hetsiky ny tsindry ambany. 7.HMI miaraka amin'ny PLC dia mahatonga ny fandidiana ho mora sy tsotra
1. Ity maodely ity dia mety amin'ny fitsofana tavoahangy biby mivelatra, toy ny can zip-top, tavoara kely na lehibe, sns. 2.Preform dia voadona tanteraka ary nafanaina tsara ary nafanaina tamin'ny jiro infrared Optimised. 3.Machine dia entin'ny varingarin'ny rivotra hafarana: faharetana, tsy misy fandotoana ary tabataba ambany. 4. automatisation avo sy faharanitan-tsaina. 5.Ny fitaovana fanarenana entona mahery vaika dia azo noforonina ary ampiasaina amin'ny hetsika tsindry ambany. 6.HMI miaraka amin'ny PLC dia mahatonga ny fandidiana ho mora sy tsotra
1. Ity maodely ity dia fitsitsiana angovo, mandeha ho azy ary mora ampiasaina. Ny marika 2.Imported dia ampiasaina amin'ny milina, ao anatin'izany ny singa pneumatika, bearings, kojakoja elektrika, sns. 3.Machine dia entin'ny servo, izay mahatonga ny fametrahana mialoha ny toerany haingana sy maharitra. 4.Ny singa fametahana dia natao ho servo-driven, fitsitsiana angovo, miorina ary mahomby, tsy misy tabataba. 5.Ny fitaovana fanarenana entona mahery vaika dia azo noforonina ary ampiasaina amin'ny hetsika tsindry ambany. 6.HMI miaraka amin'ny PLC dia mahatonga ny fandidiana ho mora sy tsotra.
Fandidiana 1.Easy sy fikojakojana mety. Ny lesoka dia azo jerena haingana amin'ny solosaina ary mora ho an'ny olona fikojakojana ny famongorana. 2. Angovo ampiasaina amin'ny fomba mandaitra sy taha ambony amin'ny vita, ary ny kalitaony dia azo antoka amin'ny rafitra fanamafisana azo antoka- jiro infrared ary bobongolo voahodina tsara 3.Miorina ny rafitra mekanika ary toerana kely no ilaina.
1. Ity maodely ity dia miavaka amin'ny tsy fandotoana, haingam-pandeha, fitoniana, fitsitsiana angovo ary toerana marim-pototry ny fivezivezan'ny kalesy. 2. Ny milina dia amboarina tsy misy rafitra hydraulic fa ny servo motor-control system dia noraisina mba hamindra haingana ny toeran'ny bobongolo miaraka amin'ny valiny haingana amin'ny herin'ny clamping mahery. Noho izany, ny tontolon'ny famokarana tsy misy fandotoana dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fonosana fanafody. 3. Ny famokarana haingam-pandeha sy haingam-pandeha dia mety mihoatra ny folo alina isan'andro. Ary angovo 40% dia azo avotana raha oharina amin'ny rafitra hydraulic. 4. Ny firafitry ny loha maty izay natao vao natao dia manome antoka fa ny plastika miempo dia midina mahitsy tsy misy fiolahana. Ny lesoka mavesatra dia azo fehezina hatramin'ny 0.1 grama. 5. Ny tahan'ny vokatra tsy nahomby dia azo nampidinina tamim-pahombiazana satria tsotra sy mora ny mianatra momba ny fanitsiana sy ny fiasan'ny milina.
1.Toggle clamping rafitra tsy misy famolavolana tehina-tehina dia manana hery matanjaka clamping ary lovia fametahana bobongolo lehibe. Ny hatevin'ny rindrina 2.Bottle an'ny lavaka tsirairay dia natao ary ny ivelany dia milamina miaraka amin'ny famolavolana ny lohan'ny famahanana foibe, novolavolain'ny foibe masinina CNC. 3.Ny singa vita amin'ny hydraulic vita soa aman-tsara, amin'ny marika nafarana, dia miantoka ny fandehanan'ny masinina sy ny fomba mahomby. 4.MOOG 100 Points Parison Controller System dia azo raisina hanatsarana bebe kokoa ny kalitaon'ny vokatra. 5. Ity maodely ity dia azo havaozina ho "Hybrid Type", ny ampahany amin'ny kalesin-tsoavaly izay natao miaraka amin'ny motera servo mba tsy hahatratra tabataba, fandidiana mora, toerana marina ary fifantohana haingana amin'ny bobongolo. 6.Machine dia azo noforonina tamin'ny robot robot, conveyor, tester an-tsokosoko, labozy vita amin'ny lasitra, milina fonosana sns ... arakaraka ny takinao.
1.Multi laver co-extrusion dia tsy voatery ary mpihazakazaka mikoriana manokana ao anaty lohan'ny maty no mahazo hatevin'ny akanjo tsirairay ary ny hatevin'ny sosona EVOH dia azo fehezina ao anatin'ny 0.03mm. 2.Toggle clamping rafitra tsy misy fametahana tehina-tehina dia manana hery mitanjaka mahery sy matanjaka fametahana bobongolo. 3.Machine dia azo ampiana amin'ny servo hydraulic servo, endrika hita maso, robot arm, conveyor, leak tester, milina fonosana sns. 4. Ity maodely ity dia azo havaozina ho "Hybrid Type", ny ampahany amin'ny kalesin-tsoavaly izay natao miaraka amin'ny motera servo mba tsy hahatratra tabataba, fandidiana mora, toerana marina ary fifantohana haingana amin'ny bobongolo.